Political Page ပုလဲသွယ်: ကြေးနီမိုင်းဟာ ဦးပိုင်အတွက်တော့ အသေးအဖွဲလေးပါ
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက ယဉ်ကျေးလာကြတယ်။ အရင်က “မောင်ပိုင်စီး” တယ်လို့ ပြောတာ အခု “မောင်” ကနေ “ဦး” ဖြစ်လာတယ်။ စီးတာကတော့ အကြီးအကျယ် စီးတယ်ပေါ့။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် (The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကို ၁၉၅ဝ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇/၉ဝ နဲ့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၁၈-၉-၁၉၈၈ နေ့မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တပ်မတော်က တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်တယ်။ ဦးပိုင်လီမိတက်ကို ၁၉၉ဝ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၆ဝဝဝ နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးပိုင်လီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းများမှ ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ပံ့ထားတဲ့ လုပ်ငန်းများ (၁၆) မျိုး
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၉) မျိုး
1. ၁။ မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်စ်
2. ၂။ မြန်မာအင်ပီးရီးရယ် ဂျိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
3. ၃။ မြန်မာရာဘာဝုဒ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
4. ၄။ မြန်မာနာနတ်ရည် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
5. ၅။ မြဝတီရေခဲစက်လုပ်ငန်း
6. ၆။ မြဝတီသောက်ရေသန့်လုပ်ငန်း
7. ၇။ ဆင်မင်း (၁/၂) ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ကျောက်ဆည်)
8. ၈။ အပ်ချုပ်လုပ်ငန်း
9. ၉။ ရွှေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(ခ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ (၁) မျိုး
10. ၁။ မြဝတီ ထရေးဒင်းလီမိတက်
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၆) မျိုး
11. ၁။ မြဝတီဘဏ် လီမိတက်
12. ၂။ ဗန္ဓုလသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
13. ၃။ မြဝတီ ခရီးသွားလုပ်ငန်း
14. ၄။ နဝဒေး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း လီမိတက်
15. ၅။ မြဝတီ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
16. ၆။ မြန်မာ့အား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
ဆင့်ပွားထောက်အပါဝင် ပူးပေါင်းမှုပြုသောဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ (၂၁) မျိုး
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၁၄) မျိုး
1. ၁။ မြန်မာဆေးဂဲလ် အင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
2. ၂။ မြန်မာဒေဝူး အင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
3. ၃။ မြန်မာယူနီမစ် အင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
4. ၄။ ရော့သ်မင် အော့ဖ် ပေါလ်ဖေါလ် မြန်မာပရိုက်ဗိတ်လီမိတက်
5. ၅။ မြန်မာ ဘရူဝါရီ လီမိတက်
6. ၆။ မြန်မာ ပေါ်စကို စတီးလ်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
7. ၇။ မြန်မာ နိုဗိုစတီးကုမ္ပဏီလီမိတက်
8. ၈။ ဘာဂျာပိန့် မင်နူဖက်ချားရင်းကုမ္ပဏီ လီမိတက်
9. ၉။ သည် ဖက်စ်အော်တို မိုးတစ်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
10. ၁ဝ။ အမ်ဂျီ ယူဘီ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
11. ၁၁။ မြန်မာနိုဗိုကုမ္ပဏီ လီမိတက်
12. ၁၂။ ရတနာကုဋေကုဋာကုမ္ပဏီ လီမိတက်
13. ၁၃။ မြန်မာဂျိတ်အင်တာနေရှယ်လီမိတက်
14. ၁၄။ မြန်မာဆီးမင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ခ။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ (၃) မျိုး
1. ၁။ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးလီမိတက်
2. ၂။ မြန်မာဖဲယားပရိုက်ပရိုက်ဗိတ်လီမိတက်
3. ၃။ ဘန့်ဟော့ ဟင်မြန်မာလီမိတက်
ဂ။ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၄) မျိုး
1. ၁။ စီးမင်း (စ်) လီမိတက်မြန်မာ
2. ၂။ မြန်မာလင်း (ဒ်) အင် (န်) ဒဲဗဲလော့မင့် လီမိတက်
3. ၃။ နေရှင်နယ်ဒီဗဲလုပ်မင့်ကော် ပိုရေးရှင်း
4. ၄။ ဟံသာဝတီဂေါက်ကွင်းနှင့် မြို့တော်ကလပ်အသင်း လီမိတက်
ရာနှုန်းပြည့်တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုပြုသော လုပ်ငန်းများ (၁၁) မျိုး
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၈) မျိုး
1. ၁။ မာကျူရီရေးမင်နှူဖက်ချာရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
2. ၂။ ပန်ကာကြိုးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
3. ၃။ မြန်မာဟွာဖူးအင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
4. ၄။ မြန်မာထရိုင်းယင့်အင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
5. ၅။ မြန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာမီလီတက်
6. ၆။ မြန်မာဆမ်ဂေါင်းအင်ဒက်စရီရယ် လီမိတက်
7. ၇။ မြန်မာတိုကီဝါကော် ပိုရေးရှင်း
8. ၈။ မြန်မာကုရိုဆာဝါထရပ်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
1. ၁။ ဒိုင်းမွန်းဒရက်ဂွန် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၂) မျိုး
1. ၁။ မိုးကုတ်မိုတယ်လုပ်ငန်း
2. ၂။ မြန်မာဟိုတယ်နှင့် ခရုဆက်စ်လီမိတက်
ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီမှ တိုးချဲ့လာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ-
၁။ အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းကို မလေးရှားမှ Comfort International Incorporate (CII) နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
၂။ ငပလီကမ်းခြေနဲ့ ကမ်းသာယာကမ်းခြေတို့မှာ ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘောဇ၊ ထူးမော်၊ အေရှဝေါလ်၊ ဝုဒ်လန်ဒ်၊ ယုဇန၊ ထွန်းလင်းရောင်၊ ဆဲဗင်းဖိုးဆဲဗင်းကုမ္ပဏီ တို့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
၃။ ဆပ်ပြာစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းကိုမွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်ခြင်း
၄။ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမပင်မြေများကို မြန်မာ မာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာ လီမိတက်ကို ခေါက်ဆွဲခြောက်စက်ရုံလုပ်ရန် ငှားရမ်းခြင်း
၅။ ဂရက်ဖိုက် အလှဆင် ကျောက်ပြားစက်ရုံကို ကျိုက်ထိုမြို့မှာတည်ဆောက်ခြင်း
၆။ သူဌေးကျွန်း ဟိုတယ်နဲ့ ကာဆီနိုလုပ်ငန်းကို ထိုင်းမှ အက်ဒမန်ကလပ်လီမိတက်ဒ်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
- ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ခုနှစ်၊ (၁၂) ကြိမ်မြောက် အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ/ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စန်း၊ ၂ဝဝ၂
- ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ် ချုပ်ကိုင်ထားမှု (သုတေသီ မောင်တင့်တယ်)http://www.facebook.com/notes/%E1%80%82%E1%80%AB-%E1%80%99%E1%80%8F%E1%80%AD/%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A-%E1%80%81/300138513437550
- Myanmar military in the money by Brian McCartan
- အများမပိုင်တဲ့ ဦးပိုင်နဲ့ အများပိုင်တဲ့ ဦးစီးဦးဆောင် (မျိုးမြင့်ချို) http://burma.irrawaddy.org/archives/26947
Posted by Dr. Tint Swe at 6:43 AM